KYOKUSHIN MYANMAR | KYOKUSHIN
I.K.O VICE PRESIDENT
I.K.O MYANMAR BRANCH CHIEF
BLACK BELT MEMBERLIST
HOME KYOKUSHIN	– KARATE DEFINATION – KYOKUSHIN DEFINATION – 11 MOTOS – DOJO OATH – DOJO ETIQUETTE ABOUT	– MAS OYAMA – I.K.O – I.K.O PRESIDENT – I.K.O VICE PRESIDENT – I.K.O MYANMAR BRANCH CHIEF ORGANIZATION	– MYANMAR COMMITTEE – INSTRUCTOR – BLACK BELT MEMBERLIST ACTIVITIES	– GALLERY – MOVIE CONTACT US	– NEWS
KARATE-DO ဟူသည် ဂျပန်ဝေါဟာရ အရ (Empty) ဗလာ ၊ Te (Hand) လက်ဖြစ်ပြီး၊ Do (way) နည်းပညာတို့ဖြစ်သည်။ Karate – Do (ဗလာလက် နည်းပညာ/ ခြေ၊လက် ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအားလက်နက် သဖွယ် နည်းပညာတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်၍ ခုခံတိုက်ခိုက်သောအတတ်ပညာကိုဆိုလိုသည်။
ဆရာကြီး Matsutatsu Oyama သည် အင်အားကြီးမားသော ကရာတေးအဖွဲ့ အစည်းကြီးကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကရာတေးအဖွဲ့အစည်းကြီးကို ကိုယ်ခံပညာ သမိုင်းလောကတွင် အာဏာအရှိဆုံးနှင့် လွှမ်းမိုးမှု အကြီးမားဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန် အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သည်။ သူသည် အာရှကိုယ်ခံပညာ ​လောကမှ အနောက်တိုင်းကိုယ်ခံပညာလောကသာမကတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိကိုယ်ခံပညာလောကသို့ ပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ကရာတေးပညာ၏ အစဉ်အလာကြီးမားသော ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် တကမ္ဘာလုံး၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။
Kyoku = Ultimate, utmost
Shin = Truth, truthfulness
Kai = Organization
Kan = Building, School
ဂျပန်လက်ရေးလှဖြင့်ရေးထားသော စကားလုံးသုံးလုံး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ “Kyoku” “အထွဋ်အထိပ်သော” ၊ “Shin” ” အမှန်တရား” နှင့် ” Kai ” “အဖွဲ့အစည်း” ဖြစ်သည်။ ထိုစာတန်းကိုDogi၏ရှေ့ရင်ဘတ်ခြမ်းတွင် တူညီစွာဝတ်ဆင်ကြသည်။
Kyoku meaning “Ultimate”.
Shin meaning “Truth” or “Reality”.
Kai meaning “Society” or “Association”.
အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် အမြတ်တနိုးတန်ဖိုးထားသော တံဆိပ်များရှိပါသည်။ ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေးတွင် လည်းလေးနက် သော အဓိပ္ပါယ်များပါဝင်သည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသည်။ ကျိုခ့်ရှင်း တံဆိပ်တွင် စက်ဝိုင်းသေးတစ်ခု၊ စက်ဝိုင်းကြီးတစ်ခု ၊ စက်ဝိုင်းကြီး၏ အထက်နှင့်အောက်သို့ချွန်ထွက်နေသော ထောင့်တစ်စုံနှင့်၊ အရှေ့နှင့်အနောက်သို့ပြန့်ထွက်နေသော ထောင့်တစ်စုံပါဝင်ပါသည်။ စက်ဝိုင်းသေးကို စက်ဝိုင်းကြီးက အပြင်ဘက်ကထပ်လျှက်အနေအထားရှိပါသည်။ အပြင်စက်ဝိုင်းကြီးသည် Circle and Point Theory (စက်ဝိုင်းဗဟိုပြုအမှတ်စက်နှင့် စက်ဝိုင်းပုံစံရွေ့လျားမှု သဘောတရား) ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ အတွင်းဘက်ရှိစက်ဝိုင်းငယ်သည် (Imply depth) “ပညာရပ်၏နက်ရှိုင်းမှုသဘော” ကိုဖော်ညွှန်း ပါသည်။ စက်ဝိုင်းကြီး၏ အထက်နှင့်အောက်သို့ ချွန်ထွက်နေသော ​ထောင့်တစ်စုံသည် (Ultimate truth) “အထွဋ်” အထိပ်သောအမှန်တရား” ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ စက်ဝိုင်းကြီး၏ ရှေ့အနောက်သို့ပြန့်ထွက်နေသောထောင့်တစ်စုံသည် (Power) “အင်အား” ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။
၁။ စစ်ရေးနည်းလမ်း (ကိုယ်ခံပညာ၏ လမ်းကြောင်း) သည် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုတွင်စ၍ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့မှုတွင် ဆုံးသည်။ ထို့ကြောင့် အမြဲတမ်းသင့်လျော်မှန်ကန်စွာ လိမ်မာ ယဉ်ကျေးပါ။
၂။ ကိုယ်ခံပညာလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ရခြင်းသည် မနားတမ်းတောင်ကမ်းပါးယံတွင် ကုတ်ကပ်တွယ်တက်ရသည်နှင့် တူသည်။ လက်တတမ်းရှိ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လုံးလုံးလျားလျားမယိမ်းမယိုင်ဘဲမြှုပ်နှံထမ်းဆောင်ထားရန်လိုသည်။
၃။ တကိုယ်ကောင်း ဆန်မှု၊ မုန်းတီးမှု၊ ထောက်ထားစာနာခြင်းမရှိမှုတို့ကြောင့် တဖက်သား၏ တိုးတက်ရပ်တည်မှုကို တားဆီးပိတ်ဆို့ခြင်းအား အချိန်ပြည့်ရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန် အစစအရာရာကို ပဏာမခြေလှမ်းကတည်းကကြိုးပမ်းပါ။
၄။ ကိုယ်ခံပညာသမားပင်ဖြစ်ပါစေ ငွေကြေး၏အခန်းကဏ္ဍကို လစ်လျူရှုထားရန် မတတ်နိုင်ပါသို့သော်မည်သည့် အခါမှ ငွေကြေးကိုသာ အလေးထားသောသူ မဖြစ်စေရန် ဂရုပြုပါ။
၅။ စိတ်နေသဘောထား၏ ရပ်တည်ချက်သည် အစွန်းမရောက်သော မှန်ကန်သည့် ရပ်တည်ချက်ဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းခြင်းမှာ ကိုယ်ခံပညာရပ်၏ လမ်းကြောင်းပင်ဖြစ်သည်။
၆။ ကိုယ်ခံပညာနည်းလမ်းသည် လေ့ကျင့်မှုရက်ပေါင်းတစ်ထောင်တွင် စတင်အခြေပြု၍ ရက်ပေါင်းတစ်သောင်း လေ့ကျင့်ပြီးမှ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သည်။
၇။ ကိုယ်ခံပညာများတွင် မိမိကိုယ်မိမိဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် အသိဥာဏ်ပညာကိုရစေသည်။ တိုးတက်ရန်အလားအလာ တစ်ရပ်အဖြစ် သင်၏လုပ်ရပ်များကို အမြဲတမ်း ဆင်ခြင် သုံးသပ်ပါ။
၈။ ကိုယ်ခံပညာလမ်းကြောင်း၏ သဘောသဘာဝနှင့်အသုံးဝင်ပုံသည် ကမ္ဘာလော အတွက်ပင် ဖြစ်သည်။။ တကိုယ် ကောင်းဆန်သော ဆန္ဒများ အားလုံးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခြင်းမီးလျှံဖြင့် ဖုတ်ကျည်းလောင်ကျွမ်းပစ် လိုက်ပါ။
၉။ ကိုယ်ခံပညာသည် အစက်တစ်စက်ဖြင့်စ၍ စက်ဝိုင်းတစ်ခုတွင်ဆုံးသည်၊ မျဉ်းဖြောင့်များသည်လည်း ဤနိယာမ သဘောတရားမှ အရင်းခံသည်။
၁၀။ ကိုယ်ခံပညာနည်းလမ်း၏ စစ်မှန်သောအနှစ်သာရကို အတွေ့အကြုံအားဖြင့်သာ သိနိုင်သည်။ဤသို့သိခြင်းသည် အနှစ်သာရ၏ လိုအပ်ချက်များကို မည်သည့် အခါမှ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိအောင် သင်ယူခြင်းပင်။
၁၁။အမြဲမှတ်သားရန်မှာ ကိုယ်ခံပညာများတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနှင့် ကျေးဇူးသိတတ်သော နှလုံးသား၏ ဆုလာဘ်များသည် စစ်မှန်သောကြွယ်ဝချမ်းသာမှုပင်ဖြစ်သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကျိုခ့်ရှင်းကရာတေး အဖွဲ့အစည်း၏ သစ္စာအဓိဌာန်
၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတုန်မလှုပ်ကြံ့ခိုင်သောစိတ်ဓာတ်မျိုးရရှိရန် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ​လေ့ကျင့်ပါမည်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရေးကြုံက သက်လုံကောင်းစေရန် ကိုယ်ခံပညာ၏ စစ်မှန်သော အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုရှာဖွေ ပါမည်။
၃။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိစိတ်ကို အလိုမလိုက် အစဉ်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် အားမာန် အပြည့်ဖြင့် ကြိုးစားပါမည်။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တန်းသား/သူတို့၏ ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ လိုက်နာ ကျင့်သုံးပါမည်။ မိမိထက်အဆင့်မြင့် သူကို ရိုသေပါမည်။ ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါမည်။
၅။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုးကွယ်ရာ ဘာသာတရား၏ တရားတော်များနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်ကြံပြီး လူလူချင်း ညှာတာထောက်ထားသောစိတ်ကို အစဉ်နှလုံးသွင်းပါမည်။
၆။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥာဏ်ပညာနှင့် ခွန်အားမြင့်မားလာရန်မှတပါး အခြားမည်သည့်အရာကိုမှ မမက်မောပါ။
၇။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဝသက်ဆုံး ကရာတေးပညာကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ကျိုခ်ရှင်းနည်းစနစ်၏ အထွဋ်အထိပ်ကို ရောက်အောက် ကြိုးစားပါမည်ဟု အဓိဌာန်ပြုပါသည်။
1.ကျောင်းသားတိုင်း Dojo သို့ရောက်ရှိသည့်အခါ (သို့) ပြန်လည်ထွက်ခွာသည့်အခါDojo အားမျက်နှာမူ၍ OSU ဟု အသံပြု၍ Rei ပြု ဦးညွတ်ကြရမည်။ မိမိတို့အချင်းချင်း ဆက်ဆံရာတွင်လည်း လေးစားမှုဖြင့် ရှေးဦးစွာ Rei ပြု ဦးညွတ်ကြရမည်။
2.Dojo သို့ နောက်ကျမှရောက်လာသော ကျောင်းသားသည် Dojo အား Rei ပြုဝင်ရောက် ပြီးနောက် နည်းပြဆရာ၏ မြင်သာသော တစ်နေရာတွင် (Seiza) ထိုင်လျက်စောင့် နေရပါမည်။
ခွင့်ပြုချက်ရမှသာ Dokora Rei ပြုပြီးကျောင်းသားများဘက်သို့ မျက်နှာမူ၍ (Shitsurei shimasu) နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါဟု ပြောဆို(Rei) ပြုပြီးမိမိခါးစည်း အဆင့်တူရာအတန်းသို့ အပြေးဝင်ရောက်နေရာယူပါ။
3.Dojo အတွင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားနေစဉ် အစာစားခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ ပီကေဝါးစားနေခြင်း လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
4.သင်တန်းချိန်အတွင်း နည်းပြဆရာ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ Dojo ပြင်ပသို့ထွက်ခွာခွင့်မရှိပါ။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ မိမိအတန်း၏ နောက်ကျောသို့ လှည့်ထွက်ပြီး အနီးဆုံးတဖက်တချက်သို့ အပြေးထွက်ခွာသွားရမည်။
5.ကျောင်းသားတိုင်း နည်းပြဆရာများအား ပြောဆိုဆက်ဆံရာတွင် နည်းပြဆရာများ၏ ဂုဏ်ပုဒ် ဖြစ်သော (Shihan, Sensei , Sempai)ဟု ဦးစွာအမည်ခေါ်ဆို၍ OSU ဟု အသံပြုကာ ဦးညွတ်အလေးပြုကြရမည်။ အမြဲတမ်းပြုမူရမည့် အစဉ်အလာကို သတိပြုကြရမည်။
6.Dojo အတွင်း နည်းပြဆရာများ၏ သင်ကြားမှုအကြောင်းအရာ ပျက်ပြားသွားစေသော အလျင်စလိုဝင်ရောက်ပြောဆိုခြင်း၊ အချင်းချင်းစကားပြောနေခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။
7.နည်းပြဆရာ၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လမ်းညွှန်ပို့ချက်ချက်များကို အာရုံစူးစိုက်၍ ရိုသေစွာ လိုက်နာရမည်။ လက်ခါးထောက်လျက် ခွန်းတုန့်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုရ၊ ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုတတ်ရမည်။
8.လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေစဉ် ပြသနာတစုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လျှင် ရပ်တန့်ခြင်းမပြုပဲ အကောင်းဆုံး အခြေအနေသို့ ရောက်အောင်ထိန်းသိမ်းလေ့ကျင့်ရမည်။ နည်းပြဆရာက သတိပြုမိမှသာ ရပ်တန့်ပါ။
9.နည်းပြဆရာ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိပဲ မိမိတို့အချင်းချင်းKumite (Fighting) လေ့ကျင့်ခွင့် မရှိပါ။ နည်းပြဆရာ၏ ရှေ့မှောက်တွင် စည်းကမ်းတကျ စနစ်ကျစွာလေ့ကျင့်ရမည်။
10.နည်းပြဆရာ၏ တာဝန်ပေးစေခိုင်းမှုကို အမြဲတမ်းအလျင်အမြန် သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
11. Dojo အတွင်း သင်ကြားလေ့ကျင့်မှု ခေတ္တရပ်နားစဉ် မည်သူမျှလဲလျောင်းနေခြင်း၊ နံရံကို မှီတွယ်နေခြင်း ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်နေခြင်းမပြုလုပ်ရ။ နည်းပြဆရာ၏ သတ်မှတ်ပေးသော အနေအထားဖြင့် အနားယူရမည်။
12. Dojo ခန်းမနေရာအား အစဉ်အမြဲသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စေရန် ကျောင်းသားတိုင်း ဂရုတစိုက်တာဝန် ယူ ထိမ်းသိမ်းကြရမည်။
13. ကျောင်းသားတိုင်း မိမိတို့၏ (Dogi) ဝတ်စုံများကို အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းသပ်ရပ် ခိုင်မြဲစွာ ဝတ်ဆင်ကြရမည်။ (Dogi) ဝတ်စုံများကို သပ်ယပ်သေသပ်စွာ ခေါက်ယူသိမ်းဆည်း ယူဆောင်ကြရမည်။
14. မိမိ၏ ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်မှု၊ ရင့်ကျက်သော စိတ်ဓာတ်တို့ကို ဖော်ပြသောအားဖြင့် (Obi) ခါးစည်းအား ဘယ်တော့မှ လျော်ဖွတ်ခြင်းမပြုရပါ။
15. ရာသီဥတု အခြေအနေအရ (သို့မဟုတ်) ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်မှုအတွက် မဟုတ်လျှင် အမျိုးသားများသည် Dogi ၏ အောက်ခံအဖြစ်T- shirt ဝတ်ဆင်ခွင့်မပြု၊ အမျိုးသမီးများသာ ဝတ်ဆင်ခွင့်ပြုသည်။
16.မိမိတကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရမည်။ ခြေသည်း၊ လက်သည်းများ ညှပ်ထားရမည်။
17.လေ့ကျင့်ချိန်အတွင်း Dogi ဝတ်စုံမှအပ အခြားသော လက်ဝတ်ရတနာများ ဝတ်ဆင်ထားခြင်း မပြုရ။
18.OSU ဟူသည် Oshi Shinobu မှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံဖြစ်သည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ရာထူးအဆင့်ဆင့်အရ ပြောဆိုခြင်း၊ မေးမြန်းခြင်း၊ တာဝန်ခွဲဝေခြင်းတို့ကို နာခံသည့်အနေဖြင့် ဇွဲရှိရှိ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ တိကျစွာလိုက်နာခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
19. OSU ဆိုသည့် အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ ရိုသေလေးစားမှု ခိုင်မာသော ရည်ရွယ်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ Kyokushin Karate ရဲ့ အထူးအရေးပါသည့် အသုံးအနှုန်းတရပ်ဖြစ်သည်။
Japan Osaka Minami （Sakaguchi）
Address :No.(601), Pyay Road, Kamayut
Judson Church Centre, Beside KBZ Bank.
Phone :(+95)973036501
:(+95)973111696
© Copyright - KYOKUSHIN MYANMAR . Developed by Orgnima.